राष्ट्रघातको शिखरबाट ओलीले बजाएको राष्ट्रवादको बाँसुरी Kasthamandap Daily
गोठको हराएको बाख्राको पाठो फेला पार्दा तमान्छे कति खुसी हुन्छ भने गुमेको मातृभूमि नै ल्याउने कुरा हुँदा को नेपाली बेखुस रहन सक्ला र ! ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समग्र नेपालीभूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएसँगै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा बहसले नयाँ स्वरूपलिएको छ । नेपाली जनताको निकै लामो सङ्घर्ष, राजनीतिक दलहरूकोमहत्वपूर्ण योगदान र युवा–विद्यार्थी,लेखक–साहित्यकार, बुद्धिजीवी, अभियन्ताहरूले सडक तताएपछि ओली यो निर्णय लिन बाध्य भएका हुन् । अन्तिम निष्कर्षकस्तो निस्कन्छ, अहिले नैभन्न नसकिए पनि कमसेकम नक्सामै भए पनि त्यो भू–भाग मेरो भन्न पाउँदा समस्त नेपालीजनलेएकहदसम्म सन्तोषको सास फेरेका छन्,जुन स्वाभाविक छ ।यद्यपि साठीलाख युवाले खूनपसिना बगाएर पठाएको रेमिट्यान्समा बेपर्वाह पिङ खेल्ने शासकहरूलाई राष्ट्रवाद धेरै महङ्गो कुरा हो ।
नेपालको इतिहासमाकेपी ओली जति बद्नाम प्रधानमन्त्री सायदै अरू होलान् । वास्तवमाओलीले देश र जनतालाई उखान र फट्याइँभन्दा अरू केही पनि दिएनन् । सत्ता तथा शक्तिकालागि जे पनि गर्न तयार ओली सङ्ख्यातन्त्रकोआधारमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जङ्गबहादुरपछिकाशक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनताका लागि यो शक्तिको कुनै अर्थ भएन । ओलीको पहिलो कार्यकाल ठिकै मानिथ्यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा उनले लिएको अडान ठिकै पनि थियो ।खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरूनेपालको दक्षिणी सिमानामा गएर मधेसवादी दलहरूसित मिलेर नेपालतर्फ ढुङ्गा बर्साइरहँदा केपी ओली मोदीका विरुद्ध कुर्लिरहेका हुन्थे । उनी त्यतिबेला सापेक्षित रूपमै भए पनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिए तर दोस्रो प्रमकारूपमा ओलीकोआजसम्मको समयावधि पुरै निरर्थक, पश्चगामी, राष्ट्रघाती र यथास्थितिवादी रहेको छ । पछिल्ला कार्यप्रकृतिले ओलीको हिजोको आंशिक राष्ट्रवादी छबि पनि तीव्र रूपमा धुमिल हुँदै गएको छ ।
ओलीको यो कार्यकालमा आसेपासेहरूको हालिमुहाली चलेको छ, जगजगी चलेको छ । बालुवाटारमा आसेपासेहरूकै राइँदाइँ छ । भ्रष्टाचारको पर्याय ओली भएको छ । जनताले ओलीलाई भ्रष्टाचारको शिरोमणि भन्न थालेका छन् । राष्ट्रघातमा त ओलीसर्वोच्च शिखरमै छन् । ओलीको अर्को अद्भूत क्षमता के रहेछ भने रछ्यानको पानी पनि गाईको दूध सम्झेर नुहाइहाल्ने, नुहाइदिइहाल्ने । अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सीआईए’ का खास प्रतिनिधिहरूलाई बालुवाटारमा विशेष भूमिका दिएर राखेका ओलीले जनताको आवाज सुन्ने कान बन्द गरेका छन् । ओलीआफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको आलोचनात्मक स्वर आउने पनि बाटो नै बन्द गर्न चाहन्थे,यही बेला आइदियो– कोराना भाइरस ‘कोभिड १९ ।
राष्ट्रघात र बद्नामको शिखरमा कहिल्यै नझर्नेगरी उक्लिसकेका ओलीलाई कोराना आएपछि क्या खुदो भयो !कोरोना नेपालमा प्रवेश गरेको समाचारले ओली प्रफुल्ल भए । उनले फेरि आफ्नो कुर्सी अकन्टक देख्न थाले । अनि प्रवचन दिन थाले– कोराना भाइरसको फ्याटीय र बोसीय फ्याक्टरबारे । ओलीको त्यो अद्भूत क्षमता देखेर दुनियाँका एकसेएक विशेषज्ञहरू, डाक्टरहरूआश्चर्यचकित परे । उनीहरू भन्दै थिए–ओहो, नेपालमा यत्रो प्रतिभा, क्या प्रतिभा! दुनियाँले ओलीको अद्भूत क्षमता र तीक्ष्णता देखे । सायद,ओलीको प्रवचन सुनेर कोरोना भाइरस पनि खित्का छोडेर हाँस्यो होला । ओलीलाई देश र जनताको भविष्यको कुनै चिन्ता देखिँदैन । कोरोना महामारीले देशलाई आर्थिक शुन्यतामा झार्दै छ । जनताले रोगले भन्दा बढी भोकले मर्दै छन् ।यसमा ओली मण्डलीलाई कुनै फिक्री देखिँदैन । कोराना महामारी त ओलीलाई व्यापार र ब्रह्मलुट मच्चाउने मेसोमेलो भएको छ। ओम्नीको ठेक्कादेखि पीसीआर परीक्षणको पन्ध्रहजार त्यसैको दृष्टान्त हो । ओलीको भित्री मनले पैसा नहुनेहरू मरे मर भनिरहेको आभास हुन्छ । यत्रो मानवीय सङ्कटको घडीमा पनि ओलीको यो चिन्तन अमानवीयता, राष्ट्रघात र जनघातको पराकाष्ठाहो ।
सन्दर्भमा नयाँ नभए पनि मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटनको नाममा आइदियो–लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– यो त सब ओलीको योजना र सल्लाहमा भएको हो । ओली भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का खास मान्छे हुन् । अहिले नेपाली राजनीति इन्डो–सीआईए र चीनको बिचमा सङ्केन्द्रित हुन खोजिरहेको देखिन्छ । भारतीय सेना प्रमुखले त स्पष्ट भाषामा नेपाललाई चीनले उचालेको भनिसकेका छन् । कैयौँ भारतीय सञ्चार–माध्यमले पनि यही आशयका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । चीन यो भारत र नेपालबिचको विषय भनेर पन्छिसकेको छ । ओली एमसीसी यही सदनबाट पारित गराउन महिरहत्ते गरिरहेका छन् ।कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुराका विषय निकै अघि छिनोफानो हुनुपर्ने थियो, तर नेपाली शासकको लम्पसारवादी चरित्रका कारण यो अहिले पनि अधकल्चो छ । भारतले सात महिनाअघि नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर नक्साङ्कन गरिसकेको थियो । त्यसबेला ओली सरकार चुँसम्म बोलेको थिएन । बरु त्यतिबेला सीमा बचाउ अभियानलगायत विभिन्न सङ्घ–संस्थाले सडक आन्दोलन चर्काएका थिए । वक्तव्यहरू जारी गरेका थिए । जनस्तरबाट वास्तविकचुच्चे नक्सा बनाइएको पनि त्यतिबेलै हो । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– चारैतिर पहिरो नै पहिरो देखेपछि ओलीद्वारा नेपालको एन्टी–इन्डियन सेन्टिमेन्टको आबरणमा सबैतिरबाट घेरिएको सङ्कटमोचनका लागि नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालीभूमि लिपुलेकमा भारतले बाटो बनाएको बारे आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नै नगरेको भन्नुले पनि प्रधानमन्त्री ओली नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे कति सचेत र सजग रहेछन् भन्नेकुरा बुझ्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन ।
नक्सा सार्वजनिक भएपछि कोरोना भाइरसको मरामारी फैलिएजस्तै ओलीको देवत्वकरण गर्नएक झुन्ड लागिसकेको छ, किनभने ओली उनीहरूको लुटको स्वर्गको रक्षाकवचथिए । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ देवत्वकरण र राक्षसीकरण गर्न बेरै लाग्दैन ।यसै सन्दर्भमा प्रदीप ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भू–भाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्नेगरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्दै छ ।’ योगेश भट्टराईले भनेका छन्, ‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युग–युगसम्म हाजिरी जवाफमा सोधिने प्रश्नका रूपमा पनि अमर भइरहनेछ !’
केपीओलीकोयो प्रकरण एन्टी–इन्डियन सेन्टिमेन्टको खेलबाहेक अरू केही देखिँदैन । ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल र भीम रावलहरूलाई देखाइदिनु थियो, त्यो देखाइदिए। कुरा यत्ति न हो ।शरीरभरि राष्ट्रघातको स्याउँस्याउँ कीटाणु बोकेका ओली महाकाली सन्धिका नायक पनि हुन्, जो अहिले नक्सामार्फत राजनीतिक दाउपेच गरिरहेका छन् । ओलीलाई मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन पटक्कै चासो नदिएको पनि आरोप छ । अहिलेको दाउपेच मूलतः ओलीको आफ्नै पार्टीभित्र रहेको छ । यो कुरा उनकै पार्टीका उपाध्यक्षको वामदेवगौतमको टिप्पणीले प्रमाणित गरेको छ । अनावश्यक रूपले पार्टीभित्रका केही हनुमानले ओलीको अचाक्ली देवत्वकरण गर्न थालेपछि अत्यन्त पीडाका साथ गौतमको प्रधानमन्त्री ओलीको बेस्सरी भण्डाफोर गरिदिए।गौतमको टिप्पणीले डबल नेकपामा सात रेक्टरस्केल बराबरको कम्पन पैदा गरिदिएको छ ।
वामदेवले लेखेका छन्, ‘नेपालका अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मैले सुरुदेखि नै पार्टीमा सशक्त विचार र जोडदार माग राख्दै आएको म सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । यसपटक पनि छुटेका नेपाली भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा मैले नै राखेको यहाँहरू सबैमा जानकारी गराउँछु ।वर्तमान सरकारका अनेकन कार्य आलोचनायोग्य हुँदाहुँदै पनि यो काम भने स्वागतयोग्य छ । किनभने, सिमाना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा ऐतिहासिक अभिलेखलाई यो नक्साले अझ बलियो प्रमाणका रूपमा आत्मसात् गर्दै आगामी पुस्तालाई सीमा रक्षाका निमित्त प्रेरणा, उत्साह र ऊर्जा दिने काम भएको छ ।अनुयायीहरूव्यक्तिकेन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ । तर, यो निर्णय पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार भएर, नेपाल सरकारबाट पनि त्यहीअनुरूप अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ ।हामीले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ ।’
हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ सामान्य हुँदैन । भारतीयसाम्राज्यवाद नयाँ पनि होइन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँले बलिदानको माग गर्न सक्तछ । त्यसको निम्ति हामी तयार हुनुपर्दछ । एकपटक भारतसँगनभिडीकन र नजितीकन यो समस्या हल होला जस्तो लाग्दैन ।कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले पोस्ट राखेको, जनगणना गरेको, मालपोत उठाएको क्षेत्र थियो । अग्रजहरूका अनुसार यो चुच्चे नक्सा त २०१२÷०१४ सालको पाठ्यपुस्तकमा थियो । त्यसपछिका शासकहरूले उपयुक्त ध्यान नदिंदा यो समस्या रहिरहेको देखिन्छ । फेरि, समस्या त्यहाँ मात्र होइन, भारतले नेपालको ७१ स्थानमासिमाना मिचेको छ, ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपालीभूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपालले यो सबको हिसाब–किताब गर्नु छ । अनेक बहाना बालुवाटारमै विदेशीएजेन्टलाई ज्वाइँ मेजमान दिने प्रम ओलीले अतिक्रमित भूमिबाट विदेशी सेना हटाऊलान्, नेपालीभूमि फिर्ता ल्याऊलान् भन्ने विश्वास कमैले मात्र गरेका छन् ।
नेपालीभूमिमा रहेका भारतीय सेनाका १८ वटा सैनिक पोस्ट कीर्तिनिधि बिस्टले २०२८ मा कालापानीबाहेक सबै हटाएका थिए । बिस्ट कालापानीबाट पनि कसैले भारतीय सेना हटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे । सिकिस्त बिरामी भएको बेला आफूलाई भेट्न जानेहरूलाई बिस्ट यो कुरा सुनाउँथे ।अहिले पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाऊ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालको नयाँ नक्साबारे धेरै आ–आफ्ना मत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेका छन् ।पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताले भनेका छन्, ‘नेपालको नयाँ नक्सा। करिब छ दशकदेखि भारतको अधीनमा रहेको भूखण्ड,हाल नक्सामा भएपनि नेपालको देखाइयो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा जिन्ना,शेख मुजिब र इन्दिरा गान्धीले मात्रै हो आफ्नो देशको नक्सा बदलेको,घटाएको वा बढाएको।अब हेर्नु छ, केपी ओलीको जमर्कोको परिणाम ।’
नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिएसँगै देशभित्र विभिन्न स्केलका तरङ्ग उठेको छ । मिडियामा विभिन्न कोणबाट समाचार प्रकाशन–प्रसारण भइरहेका छन् ।एउटा देशले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय अवश्य नै हो ।नेपालको यो निर्णयसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुराका भू–भाग भारत र नेपाल दुई देशको आ–आफ्ना नक्सामा रहन गएका छन् । यो सामान्य परिघटना होइन । यो करिब करिब युद्धकै अवस्था हो । ओलीद्वारा सदनमा भारतप्रति गरिएको टिप्पणीले पनि त्यस्तै अवस्था झल्काउँथ्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पनि ध्यान तानेको देखिन्छ । भारतीय सञ्चार–माध्यममा यसबारे आक्रोशपूर्ण समाचारहरू आइरहेका छन् । नक्सापछि भारत सरकार औपचारिक रूपमा बोलिसकेको छैन, तर पनि उसको बडील्याङ्ग्वेज सकारात्मकदेखिँदैन । जीन्यूजले नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले विवादास्पद नक्सा स्वीकृत गरेको र भारतीय भू–भागलाई आफ्नो दाबी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । भारतका केही समाचार–माध्यमले नेपाल सरकारको यो कदमलाई नयाँ दिल्लीले चीनको बढ्दो भूमिकाको नतिजाका चर्चा गरेका छन् ।टाइम्स अफ इन्डियाले लिपुलेकलाई ‘विवादित भूमि’ का रूपमा चर्चा गरेको छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रघातको शिखरबाट राष्ट्रवादको बाँसुरी बजाइरहेका छन् । ओलीसत्ताको शिखरमा जति दिन बस्छन्, उति नै देश कमजोर हुँदै जानु हो, राष्ट्र पराधीन हुँदै जानु हो ।नयाँ नक्साले ओलीमण्डलीलाई भ्रम नै भए पनि केही त्राण दिएको हुन सक्छ, यसले भारतीय साम्राज्यवाद र नेपाल–नेपाली जनताका बिचको अन्तरविरोधले केही नयाँ उचाइ लिएकै छ । अन्ततः यो अन्तरविरोधले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई नै निम्त्याउँछ । यसमाहामीले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्नैपर्दछ ।ओली‘कम्युनिस्ट’ पृष्ठभूमिबाट आएको र चौध वर्ष जेलजीवन भोगेको मानिस भए पनि विचार र व्यवहारहीनता, दर्शन र दिशाविहीनता, अहङ्कार र अल्पज्ञान तथा राष्ट्रघातको पीरामिड बनेका छन् । उनले आफूलाई क्रान्तिकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, थुन्ने र हत्या गर्ने, विकृति र विसङ्गति थुपार्ने, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने तथा रातो झन्डा ओढेर उही रातो झन्डालाई च्यात्ने मान्छेका रूपमा चिनाएका छन् । महाकाली सन्धिबाट वार्षिक सवा खर्ब आम्दानी हुने कुराको अभिव्यक्ति दिनुहुनेहरू आज विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । आज महाकाली सन्धिको हविगत के छ, यसको उत्तर दिनुपर्दैन ?केपी ओलीको अनुहार महाकाली सन्धिको ऐनाबाट हेर्नुपर्दछ । यो कुरा पनि सुस्पष्ट नै छ कि अहिलेको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कार्यभार पूरा हुनै सक्तैन । जनताको एकता रचेतनाबाट, राजनीतिक दलहरूको क्षमता र योजनाबाट सदैव आतङ्कित भइरहने ओलीजस्ता धूर्तराजहरूबाट पूर्व टिस्टा र पश्चिम काँगडाको कुरा त झन् कता हो कता !